COVID-19 – စာမကျြနှာ6– Healthy Life Journal
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဖျားနာကုဆေးခန်းတွင် တတိယအကြိမ် နှာခေါင်း/အာခေါင်တို့ဖတ် ယူမည့်ရက်ကို ရွှေ့ ဆိုင်း
———၊ ဟန်တိုးစံ ၊ ——— ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့ နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ လူနာအလွန်များနေတာကြောင့် အင်းစိန်ဖျားနာကုအခမဲ့ဆေးခန်းမှာ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေ ရယူမယ့်ရက်ကို ရွှေ့ ထားရတယ်လို့ Community Fever Clinic- Yangon Network ရဲ့  တာဝန်ခံဆရာဝန်...
အောက်စ်ဖို့ဒ်က စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးက လူ့ကိုယ်ခံအားကိုတုန့်ပြန်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးက လူတွေမှာ စမ်းသပ်ခဲ့ရာမှာ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိခဲ့ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ထုတ်ရာမှာ လူ့ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုကိုလည်း အားပေးကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီကာကွယ်ဆေးကို လူဦးရေ ၁၀၇၇ ဦးဆီမှာ စမ်းသပ်ထိုးပေးခဲ့ရာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တွန်းလှန်နိုင်တဲ့...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ရုရှားနိုင်ငံက Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးဆေးကို လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု နောက်ဆုံးအဆင့် ပြီးစီးအောင်မြင်တဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ “ လေ့လာမှုက ပြီးစီးအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ ကာကွယ်ဆေးက ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအတွက် ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့...
COVID-19 ရောဂါနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊——— COVID-19 ရောဂါကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်သလား၊ ရှိနိုင်တယ်ဆိုရမယ်။ (က) COVID-19 ရောဂါ မခံစားရပေမယ့် ပြည်သူလူထုထဲမှာ ဖိစီးမှုဒဏ်ခံစားရသူ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ...
——–၊ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်၊——- Q. မိုးတွင်းကာလမှာ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုသတိထားသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မိုးရွာလာပြီ၊ စိုထိုင်းဆများပြီး စိုစွတ်လာတဲ့အချိန် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရှင်သန်မှုက ပိုကြာနိုင်တယ်။ ဒါကို အထူးဂရုပြုရမယ်။ အစပိုင်းတုန်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ရေထဲမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနှုန်း နည်းစေရန် တစ်နေ့အနည်းဆုံး ခြောက်ကြိမ်နှင့်အထက် လက်ဆေးသင့်
—–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊—– ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရနှုန်းနည်းအောင် တစ်နေ့အနည်းဆုံး ၆-၁၀ ကြိမ်ခန့် လက်ဆေးသင့်တယ်လို့ ယူကေလေ့လာသူတွေက အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကပ်ရောဂါနဲ့ဆင်တူတဲ့ တခြားဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို အခြေခံပြီး ၂၀ဝ၆ မှ ၂၀ဝ၉ အတွင်း...
ZKO လူတစ်ယောက်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ထိတွေ့ပြီးရင် သူ့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်း ထွက်ရှိသလား၊ မထွက်ရှိဘူးလားဆိုတာ ဆန်းစစ်နိုင်မယ့် ပဋိပစ္စည်း စစ်ဆေးနည်းကို အင်္ဂလန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအတွင်း Roche ကုမ္ပဏီရဲ့ ပဋိပစ္စည်းစစ်ဆေးနည်းတွေက ရလဒ်ကောင်းတယ်လို့...
———-၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊————— မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်သည် ပြည်ဆေးရုံတွင် ပေါက်ခေါင်းမြို့မှ လူနာအမှတ်-၁၇ (ကွယ်လွန်) အား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲသို့ အသက်ရှူစက်မှ Tube ထည့်ရာတွင် မမြင်ရသဖြင့် အကာအကွယ်ဖြစ်သည့် Eye shield ကို ချွတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရင်း...